I-Cryolipolysis slimming Factory-China i-Cryolipolysis slimming abavelisi, abaxhasi
Oomatshini bokuCofa umzimba - i-Cryolipolysis, Coolsculpting
Owona mshini uphambili wokucoca umzimba yiCryolipolysis Slimming Machine (efanayo nomatshini opholileyo). Umatshini weCryolipolysis: indlela entsha, engeyiyo eyokuthambisa ngobunono nangempumelelo ukunciphisa amanqatha kwiindawo ekujoliswe kuzo zomzimba ezikhokelela ekunciphiseni, ekujongeni ukujonga okunamafutha okuphambili kwiindawo ezichongiweyo.
Njengoko i-triglyceride emafutheni iya kuguqulwa ibe yindawo eqinileyo kumaqondo obushushu aphantsi, isebenzisa itekhnoloji yokupholisa ukukhetha ngokukhethekileyo i-fat bulges kunye nokuphelisa iiseli ezinamafutha ngenkqubo ethe chu engonzakalisi izicwili ezijikelezileyo, ukunciphisa amanqatha angafunekiyo, Ukupholisa unxibelelwano lwesahlulo sesandla ilawula ubushushu besikhumba kwaye ikhusela ulwakhiwo oluhle lwesikhumba, iyayiqonda imeko ekhawulezayo yokwakha umzimba ngelixa uqinisa ulusu!
I-Cryolipolysis slimming kunye nomatshini wokubumba umzimba we-sano laser
Yamkela indlela enganyangiyo yokunyanga kwaye idlulise ngokuthe ngqo "indima efriziweyo" kwindawo yokuqokelela amanqatha ukuze kususwe iiseli ezinamafutha ezingenzeki. Ngokwokukhangelwa kwesibhedlele iMassachusetts Boston General kunye neHarvard Medical School ingcali yezesikhumba eMelika, iiseli ezinamafutha kulula ukuba zichaphazeleke ngendima eqandisiweyo, ngokuthelekisa izicwili ezikufuphi. Iiseli ezinamafutha ziya komelela kwaye zidityaniswe kwi4 ℃. Kodwa ezinye iiseli ezikufutshane ziya kufa ngo-0 ℃. Ke inokususa ngokukhuselekileyo iiseli ezinamanqatha, kwangaxeshanye, zingonzakalisi ulusu kunye nezicubu ezikufutshane zeeseli ezinamanqatha.
I-4 cryo ephatha i-Cryolipolysis slimming machine fat ukunciphisa umzimba
I-Cryolipolysis umatshini opholileyo uyindlela entsha, engafunekiyo yokunciphisa ngobunono nangempumelelo amanqatha kwiindawo ekujoliswe kuzo zomzimba ezikhokelela ekunciphiseni, ekujongeni kwendalo okujongeka kwindalo kwiindawo ezinyangiweyo.
I-Triglyceride emafutheni iya kuguqulwa iqiniswe kumaqondo athile aphantsi. Yintoni eyenza inkqubo ye-Cryolipolysis epholileyo yenkqubo yomatshini eyahlukileyo kukuba isebenzisa itekhnoloji yokupholisa phambili ukukhetha ngokukhethekileyo ukujolisa ii-bulges ezinamafutha kunye nokuphelisa iiseli ezinamafutha ngenkqubo ethe chu engonzakalisi izicwili ezingqongileyo.
Ukususwa kwamabala amabala, Ubuhle be-CO2 Laser, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems, Shr IPL Khetha, Umatshini weLaser we-Co2, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele,